Nhazi nke ikuku (I) | Netwọk Mgbasa Ozi
Nhazi nke ikuku (I)
La ikuku enwere ike kewaa ya na onu ogugu nke uzo di iche-iche kwadoro site na mgbanwe di iche iche, dika nrụgide, okpomọkụ, njupụta, ngwakọta kemịkal, ọnọdụ eletriki na magnetik. Na nke ọ bụla n'ime ha ọ ga-ekwe omume ịnwa itinye akụkụ na ogo na, n'ọnọdụ kachasị mma, ụdị nhazi. Otú ọ dị, ebe ọ bụ na a ka nwere mpaghara nke ikuku ndị a na-enyocha ma ọmụmụ nke oyi akwa dị elu n'oge na-adịbeghị anya, ọ nweghị nkọwa a nabatara n'ụwa niile maka ọkwa dị iche iche.
una ọhụụ sịntetik nke set na-enye ohere ịme ọdịiche ndị a, site na ala ruo n'èzí anyị ga-enwe:
1. Ebe obibi. Ruo ebe dị elu a na -akpọ ọnụ 80 km bụ mbụ a oyi akwa, ebe chemical mejupụtara bụ edo, iwu nke ikuku zuru oke na-emezu na ya, na n'usoro ihe okike ya ikesa oke nke oke, nrụgide na ọnọdụ okpomọkụ bụ isi.
2. Ebe obibi. N’adịghị ka mpaghara gara aga, mpaghara ndị dị n’elu hapụ ịdị n'otu na ha chemical mejupụtara, a naghịzi ahụ iwu gbasara izugbe hydrostatics ma a na-amata ndokwa site na ngwakọta ya karịa site na ya njirimara anụ ahụ; n'ihi ya, anyị na-ekwu banyere oyi akwa nke molekụla nitrogen (ruo 200 km elu), si oxygen atọm (dị n'etiti 200 na 1.000 km), nke helio (n'agbata kilomita 1.000 na 3.500), wdg. N'otu oge ahụ, n'ihi enweghị agwakọta agwakọta nke ikuku gas, nkewa mgbasa na-apụta na gas ndị dị arọ na-agbakọta ala, ebe ikuku ndị na-acha ọkụ ọkụ na-etinyekarị uche na ọkwa dị elu ebe ha nwere ike ịgbanahụ ike ndọda nke ụwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nhazi nke ikuku (I)
Ntinye NAO Positive na-adịghị mma n'ụzọ